Qaar ka mid ah Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta oo Tababar loo furay+Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Qaar ka mid ah Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta oo Tababar loo furay+Sawirro
Qaar ka mid ah Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta oo Tababar loo furay+Sawirro
Muqdisho (SONNA) Qaar ka mid ah Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska waxaa loo Tababarayaa in ay dajiyaan Qorshaha Wasaaradda ay ku shaqeyn doonto Sanadaha soo socda.
Waxaa Tababarka siinaya Macalimiin Ajnaaniib iyo Soomaali waxaana kaalin wanaagsan ka qaadanaya Hey’adda UNDP oo Soomaaliya arrimo badan ka taageerta.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta C/raxmaan Sh Yuusuf “Al Cadaala” ayaa sheegay in looga baahan yahay Shaqaalaha inay si wanaagsan uga faa’iideystaan Casharadda lasiinayo.
“Waxaan idinka rabnaa in aad si wanaagsan uga faa’iideysataan Tababarkan waxaad tihiin kuwo muhiim u ah Wasaaradda iyo Qorshaha ay leedahay waana sababta badankiin leydiin soo xushay”.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Iidaa Yoonis ayaa tilmaamay in Wasaaradda Warfaafinta ay kamid tahay Wasaaraddaha ugu shaqadda badan loona baahan yahay inay Shaqaalaheedu noqdaan kuwo dhankasta ka dhisan.
“Waxaan ku kalsoonahay Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta inay yihiin kuwo howl kar ah kuwaas oo ka faa’iideysan kara Tababarkan aadka muhiimka inoogu ah”.
Tababarkan waa waxaa uu socon doonaa sida uu Qorshuhu yahay mudo Seddex maalin ah waxaana lagu bixinayaa Cashiro ku aadanka hormarinta Qorshaha Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya.
Previous articleWasiirka Maaliyadda”Dhawaan Miisaaniyadda dowladda 2018 waxaa la horgeynayaa Golaha Wasiirada iyo Baarlamanka”